Inkasta oo badan oo dadka isticmaala smartphone dooran dhexeeya Android iyo macruufka, waxaa jira wax qalad ah ee aad ka fikirto helitaanka Phone Windows. Waxay leedahay nidaam hawlgal degdeg ah oo user-friendly iyo sidoo midaynaysa la soo saarka Microsoft lala-- weyn haddii aad inta badan ka shaqeeyaan computer ah Windows ku shaqeeya ama laptop. Sida sanadka barbaro in ku dhow ah, waxa aanu ku dhowaad samaysay la furayey cusub casriga ah ee 2015. Inkasta oo ay jirto laba qof oo ah furayey dhigay ka dib November this, warshadaha waa badan sameeyo qalab cusub oo sanadkan. In habkaani, waanu kuu sheegi doonaa ugu fiican shan telefoonada Windows cusub ee soo socda si aad u qorshayn karto markii aad iibsatay socda weyn oo u ahaan doonaa. Ha qaadan ogow in taariikhda la bilaabay ee ugu dambeeyay Windows Phone ay ku salaysan yihiin internetka rasmiga ah iyo wararka xanta ah ku wareegaya ee ka dhexeeya Xuubabkoodu sida ay la kulantay in la beddelo.
3. Microsoft Dhulka Phone
4. Alcatel OneTouch culus XL
5. Acer Liquid Jade soo faragaliso
Microsoft Lumia The 950 iyo 950 XL waa mid ka mid ah Phones ugu horeysay Windows harsan Windows 10 mobile. Telefoonada waxay leedahay Infanrix-muhiimka ah Qualcomm Snapdragon 808 processor, a screen-yadeedii shilka HD, optics camera 20Mp Zeiss la 32GB ee kaydinta (oo lagu daray taageero microSD ilaa 2TB). The Microsoft Lumia 950 ayaa soo bandhigay qaab 5.2 inch, halka 950 XL ee waa 5.7 inch. The feature ugu xiiso badan waxay leeyihiin waa technology iris-iskaanka la Windows Hello taageero, taas oo micnaheedu yahay oo kaliya aad u baahan tahay in aad eegto telefoonka ah ku xiran. Intaa waxaa dheer, waxa ay leedahay 'kiniin-fasalka' coolant dareere ah oo ay hoos u sii heerkulka gudaha. Waxaa la qorsheeyey in la sii daayo Mareykanka on November 20, halka dadka isticmaala ee Boqortooyada Ingiriiska ka filan karto si aad u hesho gacmahooda ku saabsan on December 3 2015. Microsoft ayaa sidoo kale la iibin doono ay Display xirto waqti isku mid ah si ay milkiilayaasha Lumia cusub si buuxda u awoodo kulmaan feature cusub taxanaha.
Haddii aad sii jeeda Japan, WPJ40-10 Geanee loo cayimay in la bilaabay in December 2015 iyo in la retailed at ¥ 12,800 ($ 105 Ergo oo € 97). Iyada oo qiimaha la awoodi karo oo caynkaas ah, ma filan in aad ka heli doonto muuqaalada-dhamaadka sare. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu socon doonaa on ugu dambeeyay ee Windows 10 Mobile oo waa badan doonaa dadka cusub deegaanka Phone Windows. Hadda, waxaa jira macluumaad ma waxa ay processor loo isticmaali doono, laakiin wax kasta oo ay tahay, waxaa lagu taageeri doonaa by 1GB ee RAM iyo 8GB xasuusta gudaha (la ballaariyo xasuusta ilaa 128GB via microSD). Waxaa ku qalabeysan yahay gadaal 5Mp iyo 2Mp camera hore. 4 inch xiiso leh oo cabbirkooda ayaa Windows Phone iman doonaa noocyo kala duwan oo colours.That weheliso qiimihiisa galo hoose, ka dhigi doonaa jiidasho badnaa yar iyo shakhsiyaadka ku jira miisaaniyadda xadidan.
3: Microsoft Dhulka Phone
Waqtigan xaadirka ah, jiritaanka phone tani waa sida laga abuuray awaalka. Inkasta oo ay yar oo kala fog, warar xan ah oo ku saabsan Dhulka Microsoft ee Phone ku helay kuwii ku caashaqi jiray Dhulka Microsoft iyo fanboys Phone Windows ciirciiraysay faraxsan badan - gaar ahaan markii la shaaciyay in Microsoft Corporate Madaxweyne Ku-xigeenka Panos Panay ayaa ka shaqaynaysa noocooda ah. Microsoft ayaa la filayaa in lagu daro taleefanka si ay Dhulka line-up of laptops iyo kiniiniyada ee Summer 2016 oo la taagan doonaa sida qalab kama dambaysta ah wax soo saarka ganacsiga. Sidaa darteed, halkii premium ciyaaraha, jarida-ku laayeen hardware, telefoonka, halkii ay kobcin doonaa soo saarka iyo ammaanka muuqaalada; waxaa la iman doonaa scanner IRIS, USB-C dekedda iyo Win32 Apps in dadka isticmaala ganacsi si ay u helaan awood Microsoft badan ee kala duwan ee wax soo saarka Dalka Chine. Waxaa weli heysan doono caato ah, naqshadda macdan la mid ah in ay la mid tahay dhulku Pro 4 iyo dhulku Book. Wararka xanta ah ayaa sheegay in telefoonka la shaqeeya doona Intel Atom X3 LTE (Sofia) qori ah, waxay leeyihiin 5.5 inch-yadeedii shilka HD bandhigay AMOLED, 4GB ee RAM, 64- iyo fursadaha kaydinta 128GB (la taageero microSD), iyo sidoo kale gadaal 21Mp iyo kamaradaha hore 8Mp. Waxa kale oo ay ka heli karto dusha Pen. Intaa waxaa dheer, waxaa la sheegayaa in ay kickstand ka dhisay-in si aad daawan kartaa a movie, shaqada waraaqaha iyo Skype qof si raaxo leh.
4: Alcatel OneTouch culus XL
Inkasta oo ay jiraan warar xan ah oo ku saabsan jirin marka laga bilaabi doonaa, Alcatel OneTouch XL kulul ayaa la filayaa in lagu sii daayo hore ee 2016 Waxa ay noqon doontaa astaanta ah ee ugu horeysay Windows 10 ku shaqeeya smartphone. Waxa xiiso leh, waxa kale oo ay yeelan doonaan dhigiisa ah Android; wax aan la yaabay oo ku saabsan tan ma aha markii ugu horeysay ee ay ku ciyaari qorshahan. Kale oo ka badhamada ay capacitive, labada nooc oo telefoonka waa isku mid. Phone waxa uu bixin doonaa qaab 5.5 inch 1,280x720p, a-yadeedii shilka core Qualcomm Snapdragon 210 processor, 2GB ee RAM iyo 16GB ah meel lagu kaydiyo gudaha (iyadoo ay xulashada si ay u ballaarin ilaa 32GB la microSD). Its kamaradaha gadaal iyo hore u jeeda waa 8Mp iyo 2Mp siday u kala horreeyaan. Waxaa sidoo kale la filayaa in ay telefoonka ku jiri doona qaybta smartphone miisaaniyadda.
5: Acer Liquid Jade soo faragaliso
Ugu hortooda hore, Jade Acer Liquid ka soo faragaliso eg Windows Phone caadi galiyey jir ah oo macdan ah ee ay geesaha dibadda ah iyo matte guddi madow dib. Waxay ku faantaa ah balanqaaday Infanrix-muhiimka ah Qualcomm Snapdragon 808 processor, 3GB ee RAM, 32GB kaydinta gudaha (doorasho ma jirto in ay ballaariso), 21Mp camera gadaal la flash LED dual weheliyaan 8Mp camera cajiib ah hore u selfies, oo buuxa ah touchscreen 5.5 inch HD bandhigay AMOLED. Inkastoo ay tahay mid laga cabsado ee u gaar ah, iibiyo waxaa ugu fiican in ay Windows 10 feature taxanaha. Tani waxa ay macne ka dhigi doonaa telefoonka qalab faa'iido mobile. Taxanaha dayn doonaa inaad iska beddesho taleefanka si aad PC tan iyo markii ay ogolaan doontaa in aad ku xidhi ah keyboard, mouse oo lala socdo si phone Windows ah. Waxa kale oo ay yeelan doonaan interface la mid ah sida aad PC Windows maamusho. Wax kale oo aan ahayn, oo aan wax badan la og yahay oo ku saabsan telefoonka.
Waqtigan xaadirka ah, kaliya labada telefoonada ugu horeysay ee liiska waa dhab inay ka soo baxaan. Faraha ka gudbeen in saddexda kale waxaa lagu fidin doonaa dhammaadka 2016, sababtoo ah waxay ka dhawaajin aad u soo jiidasho leh in ay iska indha.
> Resource > Windows > Best 5 New Windows Phone ay tahayna in ay Soo 2015/2016